News From Halgan Net | Radiohalgan.net
Puntland oo sii daysay Maxaabiis ka tirsanaa Al-shabaab ee oo lagu hayey guri ku yaal Garoowe
Garoowe:-Warar soo gaaraya Halgan.net ayaa sheegaya in ay jiraan dagaalyahanadii ururka al-shabaab ee lagu qabtey dagaalkii ku dhexmaray Puntland iyo Shabaab deegaanada Suuj, Garmaal iyo Garacad in mudo ahna lagu hayey guri ku yaal Garoowe oo ay maamulay say hay’adda UNICEF si xeeladaysan lagu kala iibsaday lana siidaayey.
Ma cadda ilaa hadda tirade rasmiga ah ee ka tirsanaa Al-shabaab ee laga sii dayeey guri lagu baxnaaninayey loona bixiyey Safe House oo ku yaalay magaalada Garoowe balse wararka hordhac ah ayaa sheegay in ay ahaayeen 10 -13 xubnood, wararka suuqa lagu shaaciyey ayaa sheegay in la qabtay 6 xubnood ee la sii daayey ka dib markii aysan iyagu ahayn dadka deegaanka ,walow warar kale ay sheegayaan in u jeedka laga lahaa sii daynta ay ahayd oo kaliya 4-3 xubnood oo muhiim u ah Ururka shabaab sidda aan ka soo xiganay masuul isagu si fiican u odorasa howl galada Al-shabaab.
Guriga loo bixiyey Safe House ee lagu hayey xubno ka tirsanaa Al-shabaab laguna soo qabtay dagaaladii ka dhacay Suuj , Garmaal iyo Garacad ayaa waxaa qandaraas ku qaatay dowladda Puntland waxaan lacagaha bixinayey Hay’adda UNICEF ee ka howl gasha deegaanada Puntland gaar ahaan Garoowe.
Maxaabiista lagu qabtay dagaalkii ku dhex maray Suuj , Garmaal iyo Garacad Al-shabaab iyo ciidanka Puntland ayaa qaarkood waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu sameeyey xarumo dhaqan celis wax ay ugu yeeraan ka dibna waxaa mud kooban laga sii daayey dhalinyaradii Al-shabaab sidda ay baahiyeen saxaafaddaha ka howl gala magaalada Muqdisho.
Dhinac kale ma ah markii ugu horaysay oo Madaxda Puntland ay lacag ka qaataan xubno ka tirsan Al-shabaab ka dibna laga sii daayey xabsiyadda ku yaal Puntland halka dhalinyaro qaar aan wax shaqo ah ku lahayn Al-shabaab ay ku xiran yihiin xabsiyadda ku yaal Puntland laguna doonayo oo kaliya in lacago is furasha ah laga qaato.
Saraakiisha ka tirsan Ciidanka Asluubta Puntland oo Idaacaddaha ka howl gala Puntland gaar ahaan SBC ay xiriir la sameeyeen ayaa ka gaabsaday in ay wax faahfaahn ka bixiyaan qaabka iyo sidda lagu sii daayey dhalinyaradii Al-shabaab ee lagu hayey Safe House ee ku yaalay Garoowe balse warar hoose oo ay heshay Halgan.net ayaa sheegaya in la xiray 10 askari oo ilaalo ka ahaa guriga Safe House ee lagu hayey xubnaha Al-shabaab.
Sii daynta la sii daayey dhalinyarada Al-shabaab ee lagu qabtay dagaaladii ka dhacay Suuj . Garmaal iyo Garacad ayaa waxaa ay ku soo beegnaysaa xili shalay magaalada Garoowe uu soo gaaray Madaxa FAO Daniele Donati oo kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Siyaasiyiin ku eedeeyey maamulka Puntland inuu maagan yahay muddo korodhsi.[Dhagayso]
Tue, 02/27/2018 - 12:41
Garoowe:-Siyaasiyiin ku bahoobay urur ay u bixiyeen Puntland Focus Group ayaa madaxda maamul goboleedka Puntland ku eedeeyey in aanay waxba ka qaban arimaha ay ka midka yihiin nabad gelyada iyo arimaha dastuurka, sidoo kalena waxay ku eedeeyeen madaxdaasi in ay maagan yihiin mudo korodhsi. Ururkaasi ayaa soo saaray baaq ka kooban qodobo dhawr ah, hadaba af-hayeenka ururkaas oo la yidhaa Ciise Maxamuud Faarax (Dhoollowaa) ayaa Cabdirisaaq Xaaji Catoosh uga waramay faahfaahinta baaqa ay soo saareen iyo ujeedada ururkoodaba.
Hoos ka Dhagayso waraysiga af-hayeenka ururkaas oo la yidhaa Ciise Maxamuud Faarax (Dhoollowaa)
R/wasaaraha JFS oo maanta u amba baxay dalka Imaaraadka Carabta
Mon, 02/26/2018 - 19:11
R/wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu horkacayo ayaa saaka u ambabaxay Isutagga Imaaraadka Carabta.
R/wasaaraha ayaa waxaa socdaalkiisa ku weheliya xubno ka tirsan Golaha wasiirada DFS waxaana ay casumaad ay ka heleen madaxda dowlada Imaaraadka Carabta.
Ra’’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa waxaa ay kulamo kala duwan ay la yeelan doonaan masuuliinta dalka Imaaraadka iyaga oo aan la shaacin ujeedada rasmiga ah ee socdaalka Raisulwasaaraha JFS .
Dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa uu ka mid yahay wadamada daneeya arimaha Soomaaliya waxaana ay gacanta ku hayaan ciidamo si gaara u hoos yimaada iyo dekkadaha Boosaaso iyo Berbara.
Mon, 02/26/2018 - 19:10
[See image gallery at halgan.net]
Madaxweynaha Puntland oo Magacaabay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha
Mon, 02/26/2018 - 18:47
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 26 February 2018 xafiiskiisa kasoo saaray wareegtu lagu magacaabay Agaasimaha Guud ee Wasaarada Shaqada Iyo Shaqaalaha Iyo Dhalinyarada Puntland.
Xeer Madaxweyne Lr. 27. February 26, 2018, kuna saabsan magacaabid Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada, shaqaalaha, Dhalinyarada iyo Cayaaraha Dawladda Puntland.
Markuu Qiimeeyey: Aqoontiisa iyo Khibradiisa Shaqo.
Markuu Tixgeliyey: Tala soo Jeedinta Wasiirka Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha, Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dawladda Puntland.
Waxaa Axmed Maxamuud Cabdalle (Tigaana) loo magacaabay Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Shaqada, shaqaalaha, Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dawladda Puntland.
Sun, 02/25/2018 - 14:14
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Gaas oo Magacaabay Agaasimeyaal.
Sun, 02/25/2018 - 14:01
Garoowe:-Digreeto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu magacaabay Agaasimaha Guud iyo Agaasime Waaxeed Wasaaradda Amniga iyo DDR Dawladda Puntland, kadib markii ay kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha Digreeto Xeer Madaxweyne Lr. 26.
February 24, 2018, Kuna Saabsan Magcaabida Agaasime Guud iyo Agaasime waaxeed Wasaaradda Amniga iyo DDR Dawladda Puntland.
Markuu Tixgeliyay: Aqoontooda iyo khibradooda Shaqo.
Waxaa Suleymaan Xaaji Cabdulle loo Magcaabay Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Amniga iyo DDR.
2.waxaa Maxamed Iimaan Cabdulaahi loo Magcaabay Agaasimaha Waaxda Miinno Saarka Wasaaradda Amniga iyo DDR.
Xeerakani Wuxuu Dhaqan Gelayaa Markuu Madaxwaynuhu Saxiixo Wuuna Saxiixay Madaxwaynuhu.
Wasiirka Amniga oo xaqiijiyey tirada Al-Shabaab caawa looga dilay Muqdisho
Wasiirka Amniga DFS Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa xaqiijiyay in la soo afjaray howl-galkii caawa lagu soo afjarayey weerarada iyo qaraxyo ay qaadeen kooxda Al-Shabaab
Wasiirka Amniga ee DFS ayaa Xaqiijiyey in ciidanka ay ku guuleysteen in ay dilaan 5 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Maxamed Abuukar Islow Ducaale Wasiirka Amniga DFS ayaa caawa la hadlay warbaahinta ay gacanta ku heyso DFS wuxuuna sheegay in ciidamada ay si fiican uga hortageen dhagar ay maleegayeen kooxda Al-Shabaab iyaga oo rabay buu yiri in ay xasuuqaan shacabka ku dhaqan Muqdisho.
Wasiirka Amniga DFS Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa waxaa uu sheegay in ciidanka DF ay sii wadi doonaan howlgallad ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab wuxuuna shacabka uga tacsiyeeyey dadkii wax ku noqday qaraxyada iyo weeraradii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho .
Faahfaahin Qaraxyo iyo Weerar Caawa ka dhacay magaalada Muqdisho
Fri, 02/23/2018 - 21:15
Muqdisho:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay sheegayaan in ilaa 5 dagaal yahan oo ka tirsan Al-shabaab kuna labisanaa darayska ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya oo watay gaari lagu xiray walxaha qarxa ay damceen in ay ka gudbaan bar Kontorool oo ay ciidanka dowladda Federalka Soomaaliya ay ku lahaayen Taalada Zayidka ka dibna ay xoog ku soo jiireen ciidankuna ay rasaas fara badan ku rideen.
Gaari ay wateen kooxda Al-shabaab oo siday walxaha qaraxa ayaa ku qarxay meel ku dhow Taalada Dhagaxtuur, ka dib markii ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya ee joogay Taalada Zaydka ay rasaas ay ku rideen gaariga ayna ka toogteen taayarka .
Al-shabaab ayaa waxaa u suura gashay in ay ka degaan gaariga ka dibna waxaa ay Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya isku heleen meel ku dhow Hotel Siyaad, iska horimaad culus ka dib ayaa waxaa ay ciidanku toogasho ku dileen ilaa 5 ka mid ah askartii Al-shabaab .
Dhinaca kale waxaa jira qarax kale oo ka dhacay goobta baabuurta la dhigto ee Hotelka Dorbin ee Degmada Shibis, Hotel Dorbin ayaa hotel dhawaan laga dhisay Muqdisho waxaan qarax uu geystay khasaaro iskug jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay ku soo beegmayaan xili maalin ka hor ay madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ay sheegeen inay jiraan baabuur lagu xiray walxa qarxa oo la soo galiyey magaalada Muqdisho.
Ilaa hada ma jiraan cid ka tirsan DFS oo ka hadlay qaraxyada iyo Weerarka ka dhacay magaalada Muqdisho marka laga reebo in kooxda Al-Shabaab ay sheegatay qaraxyada iyo weerarka sida dhaqanka u ahayd.
Madaxweyne JFS oo xafiiskiisa ku qaabilay Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Turkiga (Masawiro)
Fri, 02/23/2018 - 18:21
Culumada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Puntland oo Xajka Baaq ka soo saaray (Daawo)
Boosaaso:-Culumada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa baaq ka soo saaray arimaha xajka ku saabsan iyo sicirir bararka ay shirkadaha Diyaaradaha iyo kuwa dadka Xajisiiya ay ku hayaan Umada Soomaaliyeed .
Culumada ayaa baaqan u jeediyey Masuuliint DFS ,Puntland iyo dhamaan Shirkadaha ka shaqeeya Xajka
Baaqan ayaa waxaa jeedinya Culumada kala ah .
Sheekh Axmed Daahir Xasan Sheekh Faarax Maxamed Cajab Sheekh C/rashiid Abuu Saalax
Sheekh Axmed Faarax (Ahmed Dheeli ).
Nadwo Cilmiyeed ka socota magaalada Buuhoodle ee xarunat Gobalka Ceyn (Masawiro)
Buuhoodle:-Waxaa Cawa oo khamiisa 22/2/2018 Lagu ka bilaawday Masjid jaamaca ee magaalada Buuhodle Nadwo Cilmiyeedkii 4aad oo taas oo uu cinwaanka looga dhigay Horumarka Iyo Dhismaha Bulshada.
Nadwo Cilmiyedkan oo ay ka qayb qaadanaya culumada kala ah Culimo ah .
1-Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed
2-Sh Maxamuud Maxamed Xaliike
3-Sh Cabdilaahi Macalin Khaliif
4-Sh Siciid Muuse X Nuur Iyo Culima kale.
Waxaana Caawa Muxaadirada 1aad Cinwaankeedu uu ahaa Iskaashiga Iyo kaalinta uu ku leeyahay Dhismaha Ummadda waxana soo jeediyay Sh Maxamuud Xaliike.
Bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa si wacan u soo dhaweeyay soona camiray Nadwada si ay culumada uga faa,ideystaan .
Muxaadaraadka oo Dhamaystiran waxaa kala socon doontaa Inshalaah Halgan.net
Shirki Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo looga hadlay Amniga iyo Arrimo kale
Garoowe:-Shirkii golaha xukuumadda dawladda Puntland oo uu shir guddoominayey madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa waxaa looga hadlay arimaha, amniga dalka, habka hubinta badeecadaha, ilaalinta gaadiidka dawladda gaar ahaan gaadiidka GD ah.
Hoos ka eeg Shirkii golaha xukuumadda dawladda Puntland oo ka dhacay Garoowe maxaa looga hadlay
Ciidanka Amniga ee magaalada Bosaaso oo dilay nin ku hubaysan Bistoolad
Thu, 02/22/2018 - 13:07
Boosaaso:-Ciidamada Amniga ee magaalada Bosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa shalay toogtay nin ku hubaysnaa Bistoolad , ka dib markii uu diiday in uu istaago taas oo sababtay in uu toogasho ku dilo mid ka mid ah ciidanka nabad galyada wadooyinka ee gobolka Bari.
Dilka ninkaan ku hubaysnaa Bistoolada ayaa waxaa uu ka dhacay isgoyska NETCO ee magaalada Bosaaso
oo ah goob aad u mashquul badan. Dilka ninka la dilay ayaa waxaa ka soo baxay warar is khilaafsan oo ku saabsan qaabka uu dilku u dhacay dadka qaar ayaa sheegay in uu doonayey in uu dilo askar ka tirsanaa ciidanka amniga oo goobta ku sugnaa halka dad kale ay sheegayeen in uu diiday in uu is taago.
Dhinac kale Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska Boosaaso ee Gobolka Bari oo la hadlay idaacadda VOA ayaa u sheegay in ninka la dilay uu ku hubaysanaa Bistoolad uuna isku dayey in uu dilo askari ka tirsan ciidanka balse uu askarigu rasaasta kala hormaray ka dibna uu goobta ku dhintay isagoo sheegay in ninkaas uu ka tirsnaa ururka Al-shabaab.
Sarkaalkaan ayaa waxaa kale oo uu Idaacadda VOA u sheegay in 2 dhalinyaro ah oo ninkaan la socotay kana tirsanaa ururka Al-shabaab ay goobta ka baxsadeen maadaama goobtu ay ahayd goob laga raaco gaadiidka ayna dadku aad ugu badnaayeen balse ay ciidanku ay ku daba jiraan.
Ilaa hadda ma jiro wax ay soo bandhigeen Taliska guud ee Ciidanka Booliska Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari mana jirto xog ku saabsan ninkaan lagu dilay magaalada Boosaaso mana jirto war ka soo baxay ururka Al-shabaab oo sheegay in xubin ka tirsanaa ururkooda oo lagu dilay Boosaaso.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taarikhdu tahay 21 Feb 2018 waxaa uu kormeer ku sameeyey qaar kamida xarumaha dawladda Puntland ee ku yaala caasimada Garoowe, xarumahaas oo ay ka mid ahaayeen xarunta Dawladda Hoose, xarunta denbi-baadhista iyo xarunta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu horeen waxa uu kormeerkiisa ka bilaabay xarunta Dawladda Hoose ee Garoowe xili ay ka socotey shaqada maalin laha ah ee ay qabato dawladda hoose, halkaasi oo Madaxweynuhu kulan kula qaatay duqa dagmada Garoowe iyo xoghayaha Dawladda Hoose, kadibna xog waraysi kala yeeshay sida ay ugu shaqeeyan bulshada iyo dadka kayimada Goblada Waqooyi iyo Koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo magalada Garoowe u yimaada si ay u sameestaan Baasaboorada iyo dhalashada Soomaaliya.
Xilgii madaxweynaha Dawlladda Puntland uu ku guda jiray kormeerka ayaa madaxweynuhu waxaa uu mid-mid u galay xafiisyada kala duwan ee Dawladda Hoose ee Garoowe, halkaas oo ay goob joog ahaayeen shaqaalaha iyo shacabkii loo shaqeenayey, kuwaasi oo salaan guud iyo is xog waraysi kadib uu madaxweynuhu kula dardaarmay shaqaalaha Dawaladda hoose ee Garoowe inay dardar geliyaan shaqada ay u hayaan shacabka, isla markaana ay ugu adeegaan si hagar la’aan ah.
Dhinaca kale Madaxweynha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kormeer kiisa sii wata ayaa waxaa uu booqday xarumaha denbi baadhista (CID) iyo xarunta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha, halkaasi uu madaxweynu kula kulmay maamulka xarumahaasi, isla marhaantaa waxaa uu madaxweynhu ka xog wareesata sida ay shaqdu u socoto, kadibna kula dar-daarmay shaqaalaha xafiisyadaasi inay bulshada si daacda ugu adeegaan.
Sidoo kale Madaxweynha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goobihii adeega loogu samaynayey bulshada waxaa uu kula kulmay shacab soomaaliyeed oo badankiisu ka yimi Gobolada Waqooyi Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa dad bukaan socod ah oo baahi weyn uqabay in ay helaan adeeg caafimaad oo dibada ah, kuwaas oo Madaxweynuhu u amary in si deg deg ah loogu sameeyo adeega ay u baahan yihiin.
Ugu danbeen Madaxweynha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa uu booqsho ku tagay safaarada Ethopia waxaana halkaas ku soo dhaweeyey Qunsulka safaarada Ethiopia Ambasador Esmalash, iyada oo booqashada kadib Madaxweynaha Dawladda ayaa kulan gaar ah la qaatay Danjiraha Dawllada Ethiopia ufadhiya Puntland.
Wed, 02/21/2018 - 12:21
Kismaayo:-Waxaa Allah ha u naxariisto saaka ku geeriyooday magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose Sheekh Maxamuud Yuusuf Ciise oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee magaalada Kismaayo, Sheekha ayaa baryahaan dambe ku xanuunsanaa Kismaayo.
Sheekh Maxamuud Yuusuf Ciise waxaa uu ahaa Caalim afgaaban haddana ku dhiiran xaqqa, waxaa uu caan ku ahaa isbedeladii ka dhacay Kismaayo dhamaantood in aysan saameenin asagoo xili kaste Mas,uuliyadiisa culimanimo gudanaayay.
Sheekha waxaa uu ahaa mid la waydiiyo Fatwada aadna waa loogu kalsoonaa cadaaladiisa iyo aqoontiisa, waxaa uu in mudda ah mudaris ka ahaa Masjidka Jaamacadda oo ku yaalay Xaafada Calanleey Masjidka Suuqwayne ama masjidka Sheekh Maxamuud Yuusuf na waa la oran jiray.
Inkastoo da,diisu rasmiyan aan u la hubin waxaanse lagu qiyaasay in uu sideetan kor u dhaafay waxaana uu ku dhashay Kismaayo, kasakoow Cilmiga iyo fatwada loo celin jiray haddana waxaa uu ahaa dadka laga wareesto taariikhda Kismaayo.
Allah dambigiisa ha dhaafo janatul firdoosa hoygiisa allah ha uga dhigo, dhamaan ehelkii iyo ummadda Soomaaliyeedba allah sabar ha ka ka siiyo Annagana gadaashiisa Allah nama fitneeyo
Wed, 02/21/2018 - 10:33
Boosaaso:-Ciidanka Amniga Puntland (PSF) ayaa waxay maanta 20 February, 2018 hawlgal dagaal oo qorshaysan oo ka dhan ah ciidanka ururka Al-shabaab ka fuliyeen Buuraleyda deegaanada Dhadhaabo iyo Ceeldibir ee Buuraha Cal Madow,ee Gobolka Bari. Intii hawlgalkani socday, waxay ciidanka PSF dileen ilaa 3 xubnood oo ka tirsan ciidanka Al Shabaab , tiro kale oo intaa ka badana waxay gaarsiiyeen dhaawacyo kale duwan.
Dhanka kale, ciidanka PSF waxay gacanta ku soo dhigeen 2 maxbuus oo ka tirsan ururka Al- shabaab, kuwaas oo loo gudbiyey xabsiyada magaalada Bosaaso.
Qoraal ay ciidanka PSF ay ku baahiyeen bar ay ku leeyihiin baraha bulshada ayey ku sheegeen in ay sii wadi doonaan hawlgallada joogtada ah ee ay kaga hortagayaan falalka argagixisanimo ee kooxaha Al-shabab ee damacoodu yahay in ay geystaan falal argagixisanimo oo ka dhan ah shacabka iyo dawladda Puntland.
Wed, 02/21/2018 - 10:32
Garoowe:-Shirkii Nabadaynta Beelaha Cumar Maxamuud iyo Baharsame ayaa lasoo gabagabeeyey is afgaradma laga gaaray Colaadii ka dhexaysay labada beelood.
Qodobadii lagasoo saaray waxaa ka mid ah:-
1.In Colaadii la joojiyo.
2.In Qolo kasta joogto deegaankeeda Laysku soo gudbin Inta magta la kala qaadanayo.
3.In Qolo kasta saddex sano ku bixiso magta.
4.In Dowlada Itoobiya la shaqeyso Gudiyada Nabadeenta Iyo qodobo kale.
Hoos ka Daawo Shirkii Nabadaynta Beelaha Cumar Maxamuud iyo Baharsame oo la soo gabagabeeyey.
Wareysi: Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale (Dhageyso)
Ciidanka Amniga Puntland (PSF) oo soo gabgabeeyey dhiireyn ay ka wadeen magaalada Bosaaso.[ Video]
Tue, 02/20/2018 - 16:03
Boosaaso:-Ciidanka Amniga Puntland (PSF) ayaa waxay soo gebagebeeyeen wejigii labaad ee mashruuc dhirayn ah oo ay muddooyinkan dambe ka wadeen jidka 30-ka ee magaalad Boosaso ee xarunta Gobolka Bari. Ciidanka PSF waxay horay uga fuliyeen qaybo ka mid ah waddooyinka magaalooyinka Boosaaso , Qardho, Garoowe, Gaalkacyo mashaariic dhirayn ah oo bilicda iyo quruxda magaalooyinka qayb muhiim u ah.
Maamulka Gobolka Bari , Nugaal iyo Mudug ayaa waxaa ay mahad balaadhan u soo jeediyeen masuuliyinta ugu saraysa Ciidanka PSF guud ahaan gaar ahaan Agaasimaha Ciidanka PSF Generall Asad Cabdullaahi oo howlo badan oo muhiim ah qabtay ilaa iyo intii uu xilka hayey.
Hoos ka Daawo Ciidamada PSF ayaa soo gabgabeyey dhiireyn ay ka wadeen magaalada Bosaaso